आइजिपी खनाल भन्छन्, ‘प्रहरी बलियो भएकैले घरबाहिर बम पड्काउन सकेनन्’ - Everest Dainik - News from Nepal
आइजिपी खनाल भन्छन्, ‘प्रहरी बलियो भएकैले घरबाहिर बम पड्काउन सकेनन्’
काठमाडौं, जेठ १४ । सोमबारको बन्द सफल पार्न झिसमिसेमै विस्फोट गर्ने योजना बनाएका विप्लव समूहका कार्यकर्ताले टाइमर मिलाउन नजान्दा अघिल्लो बेलुकी आइतबार नै विस्फोट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । सोमबार बिहान ४स्१५ मा विस्फोट गराउने गरी टाइम सेट गर्दा आइतबार बेलुका ४ः१५ मा विस्फोट भएको प्रहरीको भनाइ छ । सुकेधारा र घट्टेकुलोमा एकैपटक विस्फोट भएको थियो । राजधानीका बिभिन्न ठाउँमा बम भेटिएका थिए । यस सम्बन्धमा आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
विप्लव समूहका हिंसात्मक घटना बढेका छन्, तर सूचना र सुरक्षामा प्रहरी कमजोर देखिएको छ । प्रहरीलाई सरकारको कस्तो निर्देशन छ रु तपाईंहरूको आफ्नै कस्तो योजना छ?
प्रहरीसँग प्रस्ट योजना छ । योजनाअनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो योजनाकै कारण उनीहरूले घरबाट बाहिर निस्किएर विस्फोट गर्न नसकेका हुन् । प्रहरीको उपस्थितिले नै घरभित्रै उनीहरू आत्तिएर बम पड्किने अवस्था आएको छ । प्रहरी बलियो भएकाले नै सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर विस्फोट गर्ने उनीहरूको योजना असफल भएको हो ।
शृंखलाबद्ध विस्फोटपछि गुप्तचर संयन्त्रमा प्रश्न उठेको छ नि?
गुप्तचरकै कारण उनीहरूका सयौँ नेता र कार्यकर्ता पक्राउ गरेका छौँ । हिजो पनि कोटेश्वरमा कुकरसहित सातजना पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ । त्यसकारण गुप्तचर कमजोर भन्न मिल्दैन । प्रहरीले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै छन् । कमजोर भएका छैनन् । स्रोतसाधनको समस्याका बाबजुद प्रहरी आफ्नोतर्फबाट शान्तिसुरक्षा कायम गर्न लागिपरेकै छ । यो कुराकानी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: IGP Khana